Nagu saabsan - Suzhou MENTIONBORN Industry Iyo Trade Co., Ltd.
Suzhou MENTIONBORN Industry Iyo Trade Co., Ltd.
Suzhou MENTIONBORN Warshadaha iyo Ganacsiga Co., Ltd. oo ku yaal No.18, East Chenghu Road, Degmada Wuzhong, Suzhou, Shiinaha. Waxaan ku takhasusay dharka isboortiga / dharka firfircoon / dharka waxqabadka iyo xirashada dharka. Khadadkayagu sidoo kale waxay daboolayaan guryaha. Annagu waxaannu ku jihaysan nahay macaamiisha oo waxaannu u sii wadnaa abuurista qiimayaal dheeri ah kuwa isticmaala dhamaadka. In kasta oo badeecadeenna ugu muhiimsan ay si xasiloon u dhoofin jireen Yurub, Ameerika & Australia tobannaankii sano ee la soo dhaafay, iibkeenna suuqa gudaha ayaa sidoo kale si weyn u koray sannadihii la soo dhaafay.
Suzhou MENTIONBORN waxaa ka mid ah R & D, wax soo saar, gaadiid iyo calaamadeyn iwm, kuwaas oo ay ku shaqeeyaan xirfadle kooxeed, hufan, sumcad leh oo lagu kalsoonaan karo. Waxaan ku fiicanahay jabinta soohdinta naqshadeynta, fikradaha ka soo horjeedka iyo khuraafaadka ah in dharka iyo dharka isboortiga aysan waxba ku xirneyn moodooyinka. Naqshadeynta xirfadeed, waxaa naga go'an inaan kicinno jacaylka qoto dheer ee dadka iyo rabitaanka dharka iyo dharka isboortiga. Ka go'an isku dhafka ugu fiican ee raaxada iyo qaabka oo dadka u beddel qaab nololeedka. Sanadihii la soo dhaafay, badeecadaha deegaanka dib loo warshadeeyay ayaa sidoo kale ah alaabteenna ugu muhiimsan ee horumarinta. Cusbooneysiintu had iyo jeer waa iimaankeenna. Waaxdeena R & D waxay ku yaalliin Suzhou, oo aad ugu dhow Shanghai, waxayna haysaa jawaab celinta ka socota xuduudaha suuqa, kor u qaadista isticmaaleyaasha dhammaadka 'la kulma iyo u siinta macaamiisheena alaabada ugu waxtarka badan.
Xaqiiqdii, wax soo saarka cusub ee Suzhou MENTIONBORN wuxuu noqdaa guusha shacabka. Sababtoo ah dhammaan hal-abuurnimadeena ayaa si gaar ah loogu talagalay inay si fiican ugu habboon yihiin shaqsi kasta, iyo tan ka sii muhiimsan, inay ahaato mid la awoodi karo markasta.
Markaad hesho alaabada saxda ah, waxay kuu noqonaysaa ishaada dhabta ah ee farxadda!
Hal-ku-dhiggeennu: HALKAN-KU DHASHO FARXAD!
Dadku u janjeedho
hormood iyo hal abuur leh
dareen qiimihiisu yahay
Waxaan sii wadi doonaa inaan diirada saarno fikirka asaasiga ah ee caafimaadka, raaxada iyo quruxda,
sii wadida buuxinta baahiyaha macaamiisha, taasoo horseedaysa horumarka warshadaha.
Sample Processing Iyo Production, Ragga Gaaban ee Gaaban Oo Nool Oo Nool, Gaabis Gaaban Isboorti Isboorti, Buste laba dhinac ah, Jaakada Ciyaaraha, Saraawiisha Ciyaaraha Casriga ah,